၁၂။ ကွန်ပြူတာအခြေခံ အပိုင်း (၃) ~ မောင်သက်ဝေ
၁၂။ ကွန်ပြူတာအခြေခံ အပိုင်း (၃)
ဒီနေ့ တော့ Keyboard အကြောင်းလေး အသေးစိတ်ရှင်းပြပါမယ်…
The keys onakeyboard let you enter information and instructions intoacomputer.
Most keyboards have 101 keys. Your keyboard may look different from the keyboard shown here.
Keyboard ဟာ ကွန်ပျူတာထဲကို အချက်အလက်များထည့်သွင်းနိုင်တဲ့ ခလုတ်လေးများပါဝင်ပါတယ်…
Keyboard မှာ 101 Keys အနည်းဆုံးပါဝင်ပြီး ယခုအခါ 104, 105 Keyboard များကို အသုံးပြုပါတယ်…
You can press Esc to quitatask you are performing.
မိမိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကို Cancel လုပ်ချင်တဲ့အခါ Esc Key ကို နှိပ်ရပါမယ်…
These keys let you quickly perform specific task. For example, in many programs you can press F1 to display help information.
F1 ကနေ F12 အထိ ရှိတဲ့ Key ကို Function Key များလို့ခေါ်ပါတယ်…
မိမိသုံးစွဲသော Software ပေါ်မူတည်ပြီး Function Key ဟာ အသုံးဝင်တဲ့ Keys များပဲ ဖြစ်ပါတယ်…တော်တော်များများ Program တွေမှာ F1 Key ကို နှိပ်ရင် Help information ပေါ်လာမှာပါ…
Alt+F4 နှိပ်လျှင် မိမိဖွင့်ထားသော Windows ကို ပိတ်သည့်အခါ သုံးနိုင်ပါတယ်..
မည်သည့် Windows မှ ဖွင့်မထားပဲ Alt+F4 ကို နှိပ်လျှင် Shut Down Dialog Box ပေါ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်…
You can press Backspace to remove the character to the left of the cursor.
Backspace Key ဟာ Cursor ရဲ့ ဘယ်ဖက်မှာရှိတဲ့ စာလုံးကို ဖျက်သည့်အခါ သုံးနိုင်ပါတယ်…
You can press Delete to remove the character to the right of the cursor.
Delete Key ကတော့ Cursor ရဲ့ ညာဖက်မှာရှိတဲ့ စာလုံးကို ဖျက်သည့်အခါ သုံးနိုင်ပါတယ်…
These lights indicate whether the Num Lock or Caps Lock features are on or off.
Status Light ဟာ Num Lock ဒါမှမဟုတ် Caps Lock ပိတ်၊ မပိတ် ပြပါတယ်…
When the Num Lock light is on, you can use the number keys (0 through 9) to enter numbers. When the Num Lock light is off, you can use these keys to move the cursor around the screen. To turn the light on or off, press Num Lock.
Numeric Keypad မှာ Num Lock မီးလင်းနေရင် နံပါတ်များကို သုံးနိုင်ပြီး Num Lock ပိတ်ထားပါက Screen ပေါ်မှာ Cursor ရွှေ့ ပြောင်းတာကို သုံးလို့ ရမှာဖြစ်ပါတယ်…
These keys let you move the cursor around the screen.
Arrow Key များဟာ Screen ပေါ်မှာ Cursor ရွှေ့ ပြောင်းရာတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်…
You can press Enter to tell the computer to carry outatask. Inaword processing program, press this key to startanew paragraph.
မိမိအလုပ်ပြီးမြောက်တဲ့အခါ Enter Key ကို နှိပ်ပါတယ်… စာရေးတဲ့ Program တွေမှာတော့ နောက်စာပိုဒ်တစ်ခုကို ပြောင်းလိုတဲ့အခါ Enter Key ကို နှိပ်ပါတယ်…
You can press the Application key to quickly display shortcut menu for an item on your screen.
Application Key ဟာ Shortcut menu ပေါ်လိုတဲ့အခါ သုံးတဲ့ Key ပါ…
You can press the Spacebar to insertablank space.
Spacebar ဟာ Space ခြားချင်တဲ့အခါ သုံးပါတယ်…
You can press the Windows key to quickly display the Start menu when using the Windows XP, Vista or Windows7operating systems.
Windows key ကို နှိပ်ရင် Start menu ကို ဖွင့်လိုက်တာပါ…
You can use the Ctrl or Alt key in combination with another key to performaspecific task. For example, in some programs you can press Ctrl and S to saveadocument.
Ctrl နဲ့Alt Key များဟာ တခြား Key များနဲ့တွဲနှိပ်ခြင်းဖြင့် အသုံးဝင်သော Command များ ပေးနိုင်ပါတယ်…
Ctrl+S ဆိုလျှင် Save Command ပါ…
Ctrl+C ဆိုလျှင် Copy ဖြစ်ပြီး Ctrl+V ဆိုလျှင် Paste ဖြစ်ပါတယ်..
တစ်ခုခုမှားသွားခဲ့လျှင် Ctrl+Z နှိပ်ပါက Undo Command နဲ့ တူပါတယ်…
Ctrl+A ဟာ Select All ဖြစ်ပါတယ်…
Caps Lock and Shift Keys
These keys let you enter text in uppercase (ABC) and lower case (abc) letters.
Press Caps Lock to change the case of all letters you type. Press the key again to return to the original case.
Press Shift in combination with another key to type an uppercase letter.
Caps Lock ဟာ စာအားလုံးကို Uppercase သုံးချင်တဲ့အခါမှာ သုံးတာပါ…
သာမန်စာရေးတဲ့အခါ Caps Lock on ထားစရာမလိုပဲ Shift နဲ့Letter Key တွဲနှိပ်ရင် Uppercase Letter ဖြစ်ပါတယ်…
Wireless keyboards do not useacable to connect toacomputer. A wireless keyboard uses an infrared transmitter and receiver to communicate withacomputer.
Wireless Keyboard သုံးတဲ့အခါ ကြိုးများနဲ့ချိတ်ဆက်စရာမလိုတော့ပါ…
Ergonomically designed keyboards position your hands naturally and support your wrists so you can work more comfortably.
Ergonomic Keyboard ဟာ စာရိုက်တဲ့အခါ လက်ကောက်ဝတ်အနေအထားကို သက်တောင့်သက်သာရှိစေရန် ပြုလုပ်ထားတာပါ…
Many new keyboards include built-in enhancements such as touchpad, microphones, speakers and volume control.
တစ်ချို့ သောKeyboard များတွင် touchpad, microphone, speaker နဲ့Volume Control များကို တပ်ဆင်ထားပါတယ်…
Most keyboards have small bumps on the F and J keys. These bumps help you position your fingers without looking at the keyboard.
မိမိလက်အနေအထားကို Keyboard မကြည့်ပဲ ထားနိုင်ရန် F နဲ့J Key တို့ တွင် အဖုလေး ပြုလုပ်ထားပါတယ်…
Most programs let you select commands by using keyboard shortcuts. These shortcuts are often shown on the menus. For example, to select the Save command in some programs, you can press the Ctrl and S keys.
A plus sign (+) between two key names tells you press and hold down the first key before pressing the second key.
Keyboard Shortcut Key များတွင် Ctrl+S လို့ ပြထားလျှင် ပထမ Key ဖြစ်သော Ctrl Key ကို ဖိထားပြီး ဒုတိယ Key ဖြစ်သော S ကို နှိပ်ရမည် ဖြစ်ပါတယ်…
Print Sceen ပြုလုပ်ခြင်း
Keyboard မှာပါတဲ့ PrtSc Key ဟာ Print Screen ပါ…
၁။ မိမိ Monitor တွင် တင်ထားသောပုံကို လိုချင်လျှင် PrtSc Key ကို နှိပ်လိုက်ပါ…
၂။ Start>>>All Program>>>Accessories>>>Paint ကို ဖွင့်လိုက်ပါ…
၃။ Edit Menu ကို နှိပ်ပြီး Paste ပြုလုပ်ပါက မိမိ Monitor Screen ကို မြင်ရပါလိမ့်မယ်…
၄။ File>>>Save as ကို နှိပ်ပြီး Save as type မှာ JPEG နဲ့သိမ်းပါ… Bitmap Image အနေနဲ့ သိမ်းလျှင် File Size ကြီးပါတယ်…
Monitor ပေါ်ရှိ Windows ကိုသာ လိုချင်လျှင် Alt+PrtSc ကို နှိပ်ရပါမယ်…
Paint တွင် Paste ပြုလုပ်ကြည့်ပါက Windows ကိုသာ Print ပြုလုပ်သွားပါမယ်…